Natao hotanterahina eo amin'ny fiainantsika ny fitiavana
"Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna" - Rôm. 13:10.
Maro dia maro ireo tsy ampy fitiavana! Enga anie ka hofongoran'ny fitiavana avy ao am-pon'izy ireo ny fankahalana, ny firehetam-po, ny adilahy, ary ny fakan'ny fangidiana izay mpahazo ny maro. Tsy ho voaray ary tsy hiely velively manerana ny fo ny fitiavan'i Jesôsy raha tsy esorina ao ny fitsiriritana, fankahalana, fialonana sy ny faharatsiana (...) Maro ireo mamita-tena, satria tsy mitoetra ao am-pon'izy ireo ny foto-kevitry ny fitiavana. Azon'izy ireo atao ny mikimpy manoloana ny fahadisoana sy ny fahalemen'ny tenany, saingy tsy afaka hamitaka an'Andriamanitra kosa izy ireo. Tsy maintsy misy fanavaozana atao. Tsy maintsy mangady lalina ao amin'ny fontsika feno avonavona ny fahamarinana. Tsy maintsy ongotany avy tao ny fototry ny toetsika tsy voamasina, mba hahafahan'ny Fanahin'i Kristy miorim-paka ao am-pontsika. Mihazakazaka ny fotoana, ary tsy ho ela dia hoentina hotsaraina ny asa rehetra. Koa na ny fahotantsika na ny anarantsika no ho voakosoka ao amin'ny bokin'ny fiainana (...)
Miasa amin'ny fomba tsotra ny fitiavana madio ary miavaka amin'ny foto-kevitra hafa. Tsy madio intsony izany raha toa ka ampifangaroana amin'ny antony manosika araka izao tontolo izao sy ny fitadiavan-tombontsoan'ny tena. Ny fatran'ny fitiavana manosika antsika hiasa no manan-danja kokoa eo imason'Andriamanitra noho ny halehiben'ny asa ataontsika. Manao ny tsara ny fitiavana, ary tsy manao afa-tsy ny tsara. Izay manam-pitiavana dia mamoa ny voan'ny fahamasinana, ary amin'ny farany dia ny fiainana mandrakizay. — YI, 13 Janoary 1898.
I Jesôsy no nanao ny fitiavana ho foto-kevitra nifehy ny fanekena teo aloha. Ary io Jesôsy io ihany no mandidy ireo mpanara-dia Azy amin'ny Testamenta Vaovao mba hanao ny fitiavana ho foto-kevitra manjaka ao am-pon'izy ireo: Ny fampiharana ny foto-kevitry ny fitiavana no tena fanamasinana. — YI, 08 Nôvambra 1894.